Vavaka hanoherana ny nofy ratsy mandritra ny fitondrana vohoka | FIVAVAHANA VAVAKA
Home vavaka Vavaka hanoherana ny nofy ratsy mandritra ny fitondrana vohoka
Androany isika dia hanao vavaka manohitra ny nofy ratsy mandritra ny fitondrana vohoka. Rehefa bevohoka ny vehivavy iray, izany no dingana voalohany amin'ny fitomboana araka izay nandidian'Andriamanitra. Na izany aza, betsaka ny zavatra mitranga eo amin'ny sehatry ny fanahy mandritra izany dingana izany raha mbola eo am-bohoka ny zaza.
Betsaka ny ady sy fanafihana mitranga amin'ny vehivavy iray rehefa bevohoka izy ireo. Ho manontany tena ianao hoe fa maninona no miady amin'ny vehivavy bevohoka ny ady matetika, satria ny vohoka dia mametraka fianakaviana iray ho eo amin'ny toerana hahatanteraka. Ary koa, ny ankizy rehetra dia mitondra fitahiana avy amin'Andriamanitra Mahery Indrindra ary omena fitahiana ho an'ny taranany ny rehetra, izany no antony mahatonga ny ady sy ny fanafihana matetika amin'ny vehivavy bevohoka.
Ny mendrika ho fantatra dia matetika, ny ady sy ny fanafihana dia tsy ananan'ny vehivavy bevohoka fa ny zaza. Na izany aza, ny ady lasa lasa an'ilay vehivavy bevohoka satria izy no siny.
Ny iray amin'ireo endrika miady amin'ny vehivavy bevohoka dia nofinofy ratsy. Zava-dehibe ny mahafantatra fa ny nofy dia asan'ny fanahy ary ny faritra ara-panahy dia mifehy ny vatana. Na inona na inona izay mipetraka ao amin'ny sehatra ny fanahy dia hipoitra amin'ny tontolo tena izy. Noho izany, tena ratsy ho an'ny vehivavy bevohoka ny miaina nofy ratsy mandritra ny fitondrana vohoka.
Rehefa manomboka mahita zava-dratsy ao anaty nofy ny vehivavy bevohoka dia famantarana mazava fa ho avy ny ady. Ny Baiboly dia nilaza fa nitolona tamin'ny nofo aman-drà isika fa tamin'ny fahefana sy ny fanapahana amin'ny toerana maizina. Noho izany, tsy ampy ny manamaivana fotsiny ny nofinofy eo amin'ny alitara ny kisendrasendra fotsiny satria tsy misy dikany mivantana aminao izany. Raha tsy misy dikany aminao izany dia misy antony bebe kokoa tokony hivavahanao.
Betsaka ny reny amin'izao fotoana izao izay tsy miraharaha raha mbola bevohoka izy ireo ary nampiasa izany ny fahavalo hangalarana zavatra lehibe amin'ny fiainan'ireo zanany. Ny zaza sasany dia teraka tsy nisy voninahitra satria ny ray aman-drenin'izy ireo dia mampiseho fahalainana amin'ny toerana fivavahana mandritra ny fitondrana vohoka. Isaky ny mahita zavatra tsy manampy amin'ny nofy momba ny zaza ao am-bohoka ianao dia zava-dehibe ny hivavahanao manohitra izany.
Ohatra ny nofinofy ratsy mandritra ny fitondrana vohoka
Mahita ny ra ao amin'ny nofy: Ity dia mety midika fa tsy fitondra-tena, tsy maintsy mandà izany amin'ny alalan'ny vavaka ianao
Mahita ny tenanao manapaka hena: Ireo dia mety ho mariky ny fahaterahana, Tsy maintsy aravanao amin'ny alàlan'ny vavaka izany
Endrika hafahafa na mahazatra izay tia anao amin'ny nofy: ireo dia mandoto ny demonia, tsy maintsy mivavaka manohitra izany ianao.
Misy olona manenjika anao amin'ny nofy
Ny endrika hafa amin'ny Nightmares
Ireo ohatra ireo dia tsy natao hampatahotra anao na hanandratra ny devoly, na dia tsy misy fitsanganana ara-tsoratra masina ho an'ny sasany amin'ireto nofinofy ireto aza fa azon'izy ireo avy amin'ny zavatra niainan'ny olona maro niharan'ny nofin'i satana. Amin'ny maha reny bevohoka anao dia tsy maintsy mahatsapa ara-panahy ianao, rehefa asehon'ny devoly anao ny nofinofy hafahafa, mitsangàna ary lavo amin'ny finoana amin'ny alalan'ny vavaka. Tsarovy fa hoy ny soratra masina hanoherana ny devoly dia handositra izany, manana ny hery izay miafina amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Rehefa manomboka manonofy ratsy ianao mandritra ny fitondrana vohoka, noho ny fahazazana, dia ambarao hatrany izao vavaka izao mandra-pahatapitry ny aizim-bavaky ny kibonao.
Ry Tompo Andriamanitra, misaotra anao aho noho io dingana mahafinaritra nataonao ahy io, mankasitraka ny hatsaram-panahinao feno fitiavana hatrany amin'ny fiainako aho, avelao ny anaranao mba hisandratra amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Ray any an-danitra, misaotra anao aho noho ny fahasoavana nomenao ahy mba hanonofy, mankasitraka anao aho satria fahatanterahanao ny fampanantenanao nataonao ho anay ao amin'ny bokin'ny Asan-draiko izay manandratako ny anaranao masina amin'ny anarana an'i Jesosy.
Ry Jesosy Tompo ô, misaotra anao aho fa tsy nitahiry ilay tsiambaratelon'ny fahavalo nandritra ny fiainako. Misaotra anao aho noho ny fahitanao nomenao ahy hahita ny drafitra sy fandaharam-potoanan'ny fahavalo ho an'ny fiainako Tompoko hankalaza anao aho satria hamotika ny drafitr'izy ireo amin'ny fiainako sy ny fitondrana vohoka amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompo ô, avy amin'ny anaran'ny zanakalahy malalako izay i Jesoa Kristy ary mivavaka aho fa ny nofinofy ratsy rehetra sy ny fanambarana rehetra momba ny vokatry ny kiboko dia ringana amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray Ray ô, fa voasoratra fa ny zanaka dia lova avy amin'Andriamanitra, Tompo, ny vokatry ny kiboko no lovanao, fanomezana hatsaram-panahy avy amin'ny seza fiandrianan'ny famindram-po, tsy hisy loza hanjo azy amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Andriamanitra Andriamanitra, hoy ny baiboly hoe iza no miteny ary tonga izany rehefa tsy nanome baiko ny Tsitoha? Tompo ô, mangataka aho mba tsy hamela ilay torohevitra hotanterahina amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Jesosy Tompo, manohitra ny hery rehetra izay nivoady aho fa hiteraka tahotra ao am-poko amin'ny famoizako nofinofy ratsy, handringana izany hery izany amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Ry Tompo Andriamanitra araky ny teninao ao amin'ny bokin'ny Ohabolana 3vs 24 fa rehefa mandry aho dia tsy hatahotra ary ho mamy ny torimasiko, dia mahazo hery amin'ny torimaso mamy amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Ry Tompo Andriamanitra, manarona ny ranao sarobidy ny ateraky ny kiboko, aza avela hahita loza aho amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny Baiboly milaza fa tsy hisy fiadiana fiadiana hanoherana antsika, Tompo, ny zana-tsipìka rehetra izay voatifitra tamin'ny zanako mbola tsy teraka tamin'ny nofy dia rava amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Jesosy Tompo ô, raha manakatona ny masoko amin 'ny torimaso aho, mangataka aminao ny fanahy masina sy ny herinao hitari-dalana ahy ary hanidy ny varavarana amin'ireo fanenjehana ratsy rehetra izy ireo izay mety handoto ny torimasoko amin'ny nofinofy ratsy amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Tompo Andriamanitra ô, mijoro amin'ny fampanantenanao aho fa milaza fa famantarana sy fahagagana ireo zanako. Tompo, ny areti-mandoto ratsy rehetra amin'ny nofy mandritra ny fitondrana vohoka dia ringanina amin'ny anaran'i Jesosy.
Andriamanitra Andriamanitra ô, hoy ny Baiboly talohan'ny namoronako anao tao am-bohoka dia efa fantatro ianao talohan'ny nahaterahanao natokako ianao; Notendreko ho mpaminany ho an'ny firenena ianao. Amin'izany koa, fantatrao ny zanako na dia eo amin'ny toetry ny fitondrana vohoka aza. Tompoko, mivavaka aho mba hiarovanao azy amin'ny herinao mahagaga mba tsy hisy zava-dratsy hitranga aminy amin'ny nofy amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Tompo Andriamanitra, ho an'ny tenako dia mangataka hery ara-panahy aho, mangataka ny herinao aho Tompo handresy ny ady rehetra mety hitranga amiko amin'ny nofy, Tompo manidina ahy ny herinao ara-panahy amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Tompo Tompo ô, misaotra anao aho noho ity fanomezana ity izay omenao izao tontolo izao izay tonga amin'ny alalako, mankasitraka ny hatsaram-ponao amin'ny fiainako aho, avelao ny anaranao mba hisandratra amin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratraVavaka hanoherana ny ody sy i Jezebel
Next lahatsoratraVavaka hanoherana ny fialonana sy ny fialonana
Emmanuel March 21, 2021 Ao amin'ny 4: 55 am
Mivavaha azafady ho an'ny vadiko mba hamonjy ny fiterahana raha tsy efa tonga ny fotoana, Izy no mitahy an'i emmanuel Akpan Andrew etsy ambany dia ny adiresy Gmail misaotra ary tahian'Andriamanitra daholo ianareo amen
Nguyễn Thị Ngọc Thảo 3 Jolay 2021 Amin'ny 3:52 hariva
Tôi rất biết ơn về sự hướng dẫn cầu nguyện thật tuyệt vời và đây là sự hướng dẫn từ Chúa để tôi được tìm thấy trong lúc tôi rất cần và tìư kiẫm kààààààààà xin được phép yêu cầu về nhiều bài cầu nguyện bằng tiếng việt hoàn chhnh và 1 bài cho chồng tôi bằng tiếng Hungary hoặc Tiếng anh, tôi thật sự rất biết ơn, xin Chúa phưc ph banứ phư yướế y x x x, Amena